Dynamos Yoramba Ichitatarika
Quality Kangadze abvisa Dynamos murutsva mushure mekukanda chibodzwa munharaunda yechipiri kupa Dynamos poindi yakakosha mumutambo wavo neBlack Rhinos muRufaro Stadium masikati emChina
Dynamos yanga yananga mune kumwe kuchema mushure mekunge Lot Chiwunga anwisa zvapa kuti Rhinos itungamire. Asi Kangadze anunura murairidzi wake Biggie Zuze nekudimbura hutungamiri uhu kwapera maminitsi makumi mashanu nemashanu.
Izvi zviri kureva kuti Zuze atora mapoinzi mana mumitambo mitatu mushure mekutora basa kubva kuna Lloyd Mutasa achiti iye chinangwa chavo ndechekupedza vari pazvikwata zvina zvinenge zviri pamusoro soro.
Mangange aya asiya Dynamos yafamba chinhanho chimwechete pamusoro kusvika pachinzvimbo chechipfumbamwe vachidarika Nichrut iyo yarohwa 1-0 ne FC Platinum kuMandava Stadium.
Mapoinzi matatu atorwa nechikwata chaNorman Mapeza aya avasiya vari pavanga vari pachinzvimbo chechipiri, mapoinzi mashanu pasi peNgezi Platinum Stars iyo iri kutungamira makwikwi aya.
Ngezi Platinum yakapedza basa rayo nezuro nekurova kwayakaita Chapungu 1-0.
FC Platinum neNgezi Platinum hadzisati dzaasangana asi zvikwata izvi zviri kubandana muvhiki regumi nenhanhatu remakundano aya kuMandava Stadium.
Asi mumusha weHighlanders mune mufaro mushure mekukunda Bulawayo City 1 kwa 0.
Triangle iyo yanga ichirwisa zvakasimba mumakundano aya nhasi yaitwa kanyama kanyama neHerentasl iyo yabuda nemapoinzi ese yakunda 1-0 muNational Sports Stadium umo matambwa zvekare mumwe mutambo uyo Yadah yarova Mutare City Rovers 1-0.
Mimwe mitambo iriko mukupera kwesvondo apo pane mutambo mukuru pakati peChicken Inn ne FC Platinum muLuveve Stadium.
Chicken Inn ndiyo iri pachinhanho chechitatu yakasonana neFC Platinum neNgezi.